Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kubudirira Kwekiriniki Yekuedza Kurapa Acute Cerebral Stroke Uchishandisa Human Umbilical Cord Ropa.
Kambani yeSouthern California cord blood Therapeutics Company StemCyte Inc. iri kuzivisa zvakabudirira zvekutanga zvePhase I yekambani yekiriniki yekuedza kurapa acute cerebral stroke vachishandisa monocytes kubva kuallogeneic human umbilical cord blood (hUCB). Zvakawanikwa zvechikamu chekutanga chekudzidza zvakaburitswa muCell Transplantation (CLL) muna Zvita 2021.
Chidzidzo cheChikamu I chakaitwa kune varwere vane makore 45-80 avo vakatsigira acute ischemic sitiroko. Umbilical cord ropa rakawanikwa kubva kuStemCyte's public cord blood inventory yakavakirwa paABO/Rh ropa rudzi, Human Leukocyte Antigen (HLA) match ye> 4/6, uye sero dhesi resero mononuclear cell (MNC) kuverenga kwe0.5-5 x 107 masero / kg. Uyezve, mana (4) 100 mL madosi emannitol akaiswa mukati memutsinga 30 maminetsi achitevera umbilical cord kuisirwa ropa uye maawa mana oga oga ipapo.
Mhedzisiro yekutanga yaive nhamba yevarwere vakagadzira graft versus host disease (GVHD) mukati memazuva zana mushure mekuisirwa ropa. Sekondari mhedzisiro yaive shanduko muNational Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Barthel index, uye Berg Balance Scale zvibodzwa. Mune imwe nyaya, murume ane makore makumi mana nematanhatu ekuzvarwa ane nhoroondo yehypertension uye hemodialysis yekupera-danho renal chirwere akabatwa allogeneically achishandisa hUCB ine yakafanana ABO/Rh, 100/46 HLA match, uye MNC count ye6 x 6 masero/kg. Murwere haana kuratidza zviitiko zvakakomba zvakashata kana GVHD panguva yekudzidza kwemwedzi ye2.63. Chibodzwa chake cheNIHSS chakadzikira kubva pa108 kusvika pa12; chikamu cheBerg Balance Scale chakawedzera kubva ku9 kusvika ku1, uye nhamba yeBarthel index yakawedzera kubva ku0 kusvika ku48. Ichi chidzidzo chekutanga chakaratidza kuti murwere mukuru ane hemiplegia nekuda kwechirwere cheschemic akapora zvachose mukati memwedzi ye0 mushure mekugamuchira allogeneic UCB therapy.
"Tinofara zvikuru nekubudirira kwekiriniki mhedzisiro yeStemCyte's Phase I kudzidza," akadaro StemCyte Mutungamiriri uye Sachigaro Jonas Wang, PhD. "Nekurohwa kwakanyanya kuri chechipiri uye chechitatu chinokonzera rufu nekuremara, zvichiteerana, pasi rose, mhedzisiro iyi yakanakisa sezvayanga isingatarisirwi." Inenge 30% -35% yevanhu vanotambura nesitiroko vanofa uye vanoda kusvika 75% yevapukunyuki vanoramba vakaremara zvachose. Kurapa kwazvino muchikamu chakaoma kunosanganisira kushandiswa kwethrombolytic, anticoagulant, uye antiplatelet agents. Zvisinei, kushandiswa kwemishonga yakadaro kunowedzera kuitika kwekubuda ropa ne15% -20%.
Cord blood stem cells anowanda kuita neural masero, uye akaonekwa achishanda mukurapa akati wandei neurodegenerative hosha. Mucerebral sitiroko, jekiseni remutsinga reUCB neMNCs rinogona kudzoreredza kugona kwekurovedza muviri pamwe nekupa neuroprotective mhedzisiro sezvakaratidzwa nekuderera kwekutaura kwezviratidziro zvinoratidzira seTNF-alpha, IL-1β uye IL-2.
Zvidzidzo Zvitsva Vanoziva Zvikonzero uye Kurapwa kweRopa Maropa ane chekuita neCOVID-19
Positive Clinical Data kubva kuChidzidzo cheSero Therapy ye...
Middle East tourism: Investment, mazano matsva, tekinoroji ...
South African Airways yakadoma North America itsva...
Iwo 8 Akanakisa Las Vegas Hotels kune Vakaroorana
Dare reLondon rinorayira kuendeswa kwaJulian Assange ku ...
Vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi maviri vanoungana muBrussels kuBelgian ...
Nyowani-Yakavakirwa Pamba Yekuongorora yeDuchenne Muscular...
Italian Exhibition Group: Bhizinesi riri kuwedzera zvino
Iyo chaiyo vhezheni yeitsva Kigali Declaration pa...
Itsva data pamishonga inorwisa mavhairasi yeHepatitis B neC
Rumuko munguva yeHondo